Ry Kristianina! Ampitahao Amin’ny Baiboly ny Zavatra Inoanao
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Batak (Toba) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kamba Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Lamba Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mbunda Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Niue Norvezianina Nyaneka Nzema Ossète Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tchouvache Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Vietnamianina Wallis Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zoloa Éwé
KRISTIANINA ve ianao? Raha izany no izy, dia anisan’ireo olona roa arivo tapitrisa mahery eran-tany (efa ho 1 ao anatin’ny 3), izay milaza ho mpanara-dia an’i Kristy ianao. An’arivony izao ny Fivavahana Milaza Azy ho Kristianina, nefa mifanohitra ny fampianarany sy ny fomba fiheviny. Mety tsy hitovy amin’ny zavatra inoan’ny olon-kafa milaza azy ho Kristianina àry ny anao. Tena zava-dehibe anefa ve izay inoanao? Eny, raha tianao ny hampihatra izay lazain’ny Baiboly momba ny atao hoe Kristianina.
Nantsoina hoe “Kristianina” ny mpianatr’i Jesosy Kristy, tany am-boalohany. (Asan’ny Apostoly 11:26) Tsy nila nitondra anarana hafa izy ireo, satria iray ihany ny Fivavahana Kristianina tamin’izany. Samy nanaraka ny fampianarana sy tari-dalan’i Jesosy Kristy, mpanorina azy io, izy ireo. Ary ahoana ny amin’ny fivavahanao? Mino ve ianao fa izay nampianarin’i Kristy sy ninoan’ny Kristianina voalohany no ampianarin’izy io? Azonao antoka ve izany? Tokana ihany ny fomba ahalalana ny marina: Ampiasao ny Baiboly.
Diniho izao: Tena nohajain’i Jesosy Kristy ny Soratra Masina, satria nekeny ho Tenin’Andriamanitra. Tsy nankasitrahany ireo nihevitra ny fomban-drazana ho zava-dehibe kokoa, ka nanamaivana ny fampianaran’ny Baiboly. (Marka 7:9-13) Nampifanaraka ny zavatra ninoany tamin’ny Soratra Masina àry ny tena mpianatr’i Jesosy. Mila mandini-tena ny Kristianina tsirairay hoe: ‘Mifanaraka amin’ny Baiboly ve izay ampianarin’ny fivavahako?’ Ho voavaly izany raha manao fampitahana ianao.
Nilaza i Jesosy fa tokony hivavaka araka ny fahamarinana isika, ary ao amin’ny Baiboly no misy ny fahamarinana. (Jaona 4:24; 17:17) Niteny koa ny apostoly Paoly fa ho voavonjy izay manana “fahalalana marina tsara ny fahamarinana.” (1 Timoty 2:4) Tokony hifanaraka amin’ny fahamarinana ao amin’ny Baiboly àry ny zavatra inoantsika, mba ho voavonjy isika!
AHOANA NO HANAOVANA ILAY FAMPITAHANA?
Asainay ianao hamaky an’ireo fanontaniana enina ato amin’ity lahatsoratra ity, sy hijery ny valiny omen’ny Baiboly. Jereo ao amin’ny Baiboly mihitsy ireo andininy ary saintsaino. Diniho avy eo raha mifanaraka amin’ny Baiboly ny fampianaran’ny fivavahanao.
Tena zava-dehibe ny hanaovanao an’io fampitahana fohy io. Misy fampianarana hafa tianao hampitahaina amin’izay lazain’ny Baiboly ve? Ho faly ny Vavolombelon’i Jehovah hanampy anao handalina ny fahamarinana ao amin’ny Baiboly. Miresaha àry amin’izy ireo raha te hianatra Baiboly maimaim-poana ianao, na midira ao amin’ny tranonkalanay jw.org/mg.
1 FANONTANIANA: Iza moa Andriamanitra?
VALINY: I Jehovah, Rain’i Jesosy, no Andriamanitra. Efa nisy foana izy ary hisy mandrakizay. Mpamorona ny zava-drehetra izy sady mahery indrindra.
“Isaoranay mandrakariva Andriamanitra, Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika, rehefa mivavaka ho anareo izahay.”—Kolosianina 1:3.
“Mendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery ianao, Jehovah ô, eny, ry Andriamanitray ô, satria namorona ny zava-drehetra ianao.”—Apokalypsy 4:11.
Jereo koa ny Romanina 10:13; 1 Timoty 1:17.
2 FANONTANIANA: Iza moa i Jesosy Kristy?
VALINY: Zanak’Andriamanitra lahimatoa i Jesosy. Noforonina izy, izany hoe nanam-piandohana. Eo ambany fahefan’Andriamanitra izy, ary manao ny sitrapony.
“Ny Ray dia lehibe noho izaho.”—Jaona 14:28.
“[Jesosy] no endrik’ilay Andriamanitra tsy hita maso, ary izy koa no lahimatoa amin’ny zavaboary rehetra.”—Kolosianina 1:15.
Jereo koa ny Matio 26:39; 1 Korintianina 15:28.
3 FANONTANIANA: Inona moa ny fanahy masina?
VALINY: Hery ampiasain’Andriamanitra hanatanterahana ny sitrapony ny fanahy masina. Tsy Andriamanitra izy io. Mety ho feno fanahy masina ny olona iray, ary mety hahazo hery avy amin’izy io.
“Rehefa nandre ny fiarahaban’i Maria i Elizabeta, dia nibitaka ny zaza tao an-kibony. Ary feno fanahy masina i Elizabeta.”—Lioka 1:41.
‘Hahazo hery ianareo rehefa tonga aminareo ny fanahy masina.’—Asan’ny Apostoly 1:8.
Jereo koa ny Genesisy 1:2; Asan’ny Apostoly 2:1-4; 10:38.
4 FANONTANIANA: Inona moa ny Fanjakan’Andriamanitra?
VALINY: Fitondram-panjakana any an-danitra io Fanjakana io, ary i Jesosy no Mpanjakany. Tsy ho ela dia hotanterahin’izy io eran-tany ny sitrapon’Andriamanitra.
“Nitsoka ny trompetrany ny anjely fahafito, dia nisy feo mafy tany an-danitra, nanao hoe: ‘Ny fanjakan’izao tontolo izao dia efa lasa fanjakan’ny Tompontsika sy ny Kristiny, ary Izy hanjaka mandrakizay mandrakizay.’”—Apokalypsy 11:15.
Jereo koa ny Daniela 2:44; Matio 6:9, 10.
5 FANONTANIANA: Mankany an-danitra daholo ve ny tsara fanahy?
VALINY: Tsia. Olona vitsivitsy tsy mivadika ihany no mankany. Antsoina hoe “ondry vitsy” izy ireo, ary Andriamanitra no mifidy azy. Hiara-mitondra amin’i Jesosy izy ireo, ary hanjaka amin’ny olombelona.
“Aza matahotra, ry ondry vitsy, fa sitraky ny Rainareo ny hanome anareo ny fanjakana.”—Lioka 12:32.
“Ho mpisoron’Andriamanitra sy Kristy ireo, ka hiara-manjaka aminy.”—Apokalypsy 20:6.
Jereo koa ny Apokalypsy 14:1, 3.
6 FANONTANIANA: Inona no fikasan’Andriamanitra momba ny tany sy ny olombelona?
VALINY: Ho lasa paradisa ny tany rehefa mitondra ny Fanjakan’Andriamanitra. Ho salama tsara sy hiadana foana ary ho velona mandrakizay ny olona tsy mivadika.
‘Ny mpandefitra no handova ny tany, ka tena ho finaritra amin’ny fiadanam-be.’—Salamo 37:10, 11.
“Hofafany ny ranomaso rehetra amin’ny mason’izy ireo, ka tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy intsony ny alahelo na ny fitarainana na ny fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha.”—Apokalypsy 21:3, 4.
Jereo koa ny Salamo 37:29; 2 Petera 3:13.
Mitovy ve ny Fivavahana Rehetra ary Samy Manampy ny Olona Hifandray Amin’Andriamanitra?
Misy zavatra roa resahin’ny Baiboly ahalalana ny valin’izany.
Hiresaka fohifohy momba ny zavatra inoan’ny Vavolombelon’i Jehovah io lahatsoratra io.
Hizara Hizara Mba Ampitahao Amin’ny Baiboly hoe ny Zavatra Inoanao!
Nahoana no Be dia Be ny Fivavahana Milaza ho Kristianina?
Hevi-diso Enina Tsy Tokony Hinoan’ny Kristianina